Izivikeli zezihlalo ezihamba phambili zezinja: unakekele imoto yakho! | Izinja Umhlaba
Sithanda ukwenza zonke izinhlobo zokuhamba nezinja zethu. Ngakho-ke, into enethezekile kakhulu ukuwaphatha emotweni, noma ngabe lokhu kufanele siqaphele ngoba njengoba sazi, izinja ngeke zime futhi noma ngabe zenza njalo, zizogcwalisa zonke izihlalo ngoboya. Ngakho-ke sidinga i- umvikeli wesihlalo semoto sezinja.
Enye yezesekeli eziyisisekelo ezenza impilo ibe lula kithina, ngenkathi sinakekela isimo semoto yethu. Uma konke kuyizinzuzo! Namuhla uzozithola, kepha nakho konke okudingeka ukwazi mayelana nabavikeli bezihlalo zemoto, ngoba sifuna ukuthi uhlale ukhetha eyodwa oyidingayo.
1 Izivikeli zezihlalo ezihamba phambili zezimoto
2 Ngabe kuyadingeka ukuletha umvikeli wezihlalo lapho sithatha inja emotweni?
3 Izinzuzo zokusebenzisa izembozo zemoto yenja
4 Izinhlobo zezembozo zezihlalo zemoto zezinja
4.1 Ikhava yendawo yonke
4.2 Isihlalo sokuphepha
5 Umvikeli wesihlalo semoto omuhle kufanele abukeke kanjani
6 Kuphi ukuthenga isivikeli semoto yenja
Izivikeli zezihlalo ezihamba phambili zezimoto
Nayi inketho yezivikeli zezihlalo zemoto ezinconyelwe kakhulu ukuvikela izinwele nokunye ukungcola ekungcoliseni izinto eziphakeme zemoto yakho:
Ikhava Yemoto Yenja, Amakhava...
Ngabe kuyadingeka ukuletha umvikeli wezihlalo lapho sithatha inja emotweni?
Iqiniso ukuthi liyadingeka noma linconywe kakhulu. Akudingeki sicabange ngakho kuphela lapho sithatha uhambo olude, kepha uma sizohamba kancane naye kwenye indawo futhi sidinga ukuthatha imoto, izobe isivele iyindlela enhle. Ngoba isilwane sizoba nendawo yaso ngenkathi sikwazi ukuphefumula kalula futhi siqhubeke nokucabanga ngokunakekela imoto yethu. Ngakho-ke sibulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa mayelana nenduduzo kanye nenhlanzeko.
Yize ngakolunye uhlangothi, kunabantu abaningi abancamela ukusebenzisa ophethe noma ezihlalweni esezivele zenzelwe bona futhi ezibekwa kalula emotweni. Indlela yokuqinisekisa ukuthi ukushayela kuzoba okuphelele, ngaphandle kweziphazamiso.
Izinzuzo zokusebenzisa izembozo zemoto yenja
Sizoqoqa zonke izinwele lokho kungawa futhi kuzobavimba ekunamatheleni esihlalweni.
Inikeza induduzo ezilwaneni zethu ngoba imvamisa banokuthinta okuthambile noma i-padding elula.
Uma ukuhamba nesilwane sakho bekusensimini noma eduze kwamanzi, uzokugwema ukungcola emotweni ngoba kuzoba njalo okuhehayo.
Futhi, ivikela imoto kumswakama, ukuvimbela ukuthi izihlalo zingalimali.
Ngaphandle kokukhohlwa kunuka. Ngoba zivame ukwenzeka futhi ngenxa yalesi sizathu, ngaso sonke isikhathi kungcono ukuhlala kwikhava kunasezihlalweni.
Okunye okuhle ukuthi kuzovela imihuzuko embalwa emotweni.
Imvamisa zinamaphakethe noma amagumbi athile lapho ungagcina khona izesekeli ezibalulekile zezilwane ezifuywayo.
Izinhlobo zezembozo zezihlalo zemoto zezinja
Ikhava yendawo yonke
Iyisembozo esiyisisekelo ongasibeka kahle ezihlalweni. Ungakhohlwa ukuthi kukhona nenketho yesiqu. Isembozo esibanzi okumele sisivule ukumboza ingxenye lapho isilwane sethu sizohamba khona. Kepha yebo, kufanele siyibambe kahle ukuze inganyakazi. Okwakho, imvamisa zinemichilo ezonamathiselwa ekhanda. Iningi libuye libe nochungechunge lokuvuleka lapho kufakwa khona amabhande esihlalo.
Wimypet Manzi ...
Uma ungafuni isembozo esigcwele ngoba mhlawumbe inja yakho incane noma inenkani, akukho okufana nesihlalo semoto. Uhlobo lwezihlalo ezingafani kodwa lokho kuzophinde kuboshelwe kosofa bemoto. Ifana nezihlalo zezingane kepha kulokhu ezifuywayo zethu. Khumbula ukuthi kufanele uyibambe kahle nokuthi uma usuyenzile, banayo nebhande elinjengebhande ukuze ubathwale. Ngale ndlela sigwema iziphazamiso ezisesondweni ezingaba yinhlekelele. Imvamisa ayinamanzi futhi anezikhala zokuqeda ukuphefumula okungcono.
Umvikeli wesihlalo semoto omuhle kufanele abukeke kanjani
Ukumelana: Ukumelana uma sikhuluma ngezilwane kubaluleke kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi akuzona zonke izinja ezizolile ngokulinganayo yingakho sizobheka okokusebenza okusekela ukusetshenziswa kanye nezinzipho zezinyane lethu elinoboya. Iningi lamamodeli ngesimo somvikeli wesihlalo semoto yenja, ifika i-padded futhi lokhu kuyivumela ukuthi ikwazi ukumelana kangcono.
Manzi: Ukugwema noma yiziphi izinkinga ongahle ube nazo phakathi nohambo, kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi isivikeli asinamanzi. Hhayi nje ngenxa yezidingo zakho zomzimba, kodwa ngoba ungangena emotweni imilenze yakho isamanzi futhi lokhu kungadala ukuthi umswakama uhlale esihlalweni, uyonakalise ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, konke kuzoba esimeni ngaphandle kwenkinga enkulu.
Ngemigodi yokudlulisa ibhande lenja: Imvamisa bayayiletha, ngoba ngaleyo ndlela siqinisekisa ukunethezeka okukhulu lapho sisendleleni. Kepha akulimazi ukwenza isiqiniseko sokuthi yebo inezikhala noma izimbobo. Ngoba kuzoba lapho lapho kuzodluliswa khona amabhande noma izisekelo ezizokwenza ukuthi isilwane sethu sihambe kahle sisekelwa.
Ngezivimbelo zekhanda: Ukuvimbela izembozo ekuhambeni nokunyakaza kwemoto noma okwezilwane ezifuywayo, kufanele futhi zibe nohlobo lwamahange, ngendlela yemichilo emide, izonamathiselwa kuma-headrest. Ngokuya ngesimo sekhava yethu, zinganamatheliswa kuphela emihlane noma nakwangaphambili.
I-anti-slip: Ngaphezu kokucabanga ngekhava okulula ukuyihlanza, enephedi encane futhi engazweli noma engenawo amanzi, futhi asikwazi ukukhohlwa ukuthi ayisheleli. Ngoba ngale ndlela sizoqinisekisa ukuthi isilwane sethu asisheleli noma sihambe phakathi nohambo. Lokhu kuzokwenza ukuthi ikhululeke kakhudlwana futhi kunjalo, nakithi ngoba sizogxila kakhulu emgwaqeni.
Kuphi ukuthenga isivikeli semoto yenja
Amazon: Nakulokhu futhi, i-Amazon isinikeza zonke izinhlobo zamakhava noma isivikelo semoto sezinja. Ngokuqeda ukumelana, okulula ukukuhlanza futhi okuzobumba ngokuphelele izimoto zakho. Ngaphezu kokubheja ezokuphepha hhayi kuphela kumakhava ashiwo kepha nasezihlalweni ze-booster.
kiwikoIsitolo esingochwepheshe bezilwane sihlinzeka ngezinketho ezingcono kakhulu njengabavikeli abaphelele abazoboshelwa ezihlalweni, njengezihlalo, ukuthwala isilwane esivikelwe kakhulu. Ungajabulela amathuba amaningana ngokuya ngezidingo zakho.
I-Decathlon: Esitolo sezemidlalo ngokwenza kahle futhi bashiye isikhala sezilwane ezifuywayo futhi lapho singathola izinhlobo ezahlukahlukene zabathuthi, ukuze ezifuywayo zivikelwe kahle njalo.
ILidlLe sitolo ihlale ivula izesekeli zasekhaya nezezifuyo. Ngakho-ke kulokhu, sinenketho yokuthola ikhava yesihlalo elula ezovimbela izinwele kusofa noma iye ngqo kwikhava yezihlalo engabizi kakhulu yezilwane ezifuywayo.
empambana: ICarrefour inesembozo esishibhile futhi inezintambo zokusekelwa okungcono. Yize kuliqiniso ukuthi inamamodeli amaningana nokuthi onke anomphetho ongangenisi manzi futhi ongazweli. Yini enye esingayicela?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Umvikeli wesihlalo semoto yenja